Peji 3 - 4 Mari isingakanganwike muBhangi mari-ins - Wwe
4 Mari Yakawanda isingakanganwike muBhangi mari-ins
# 2 Edge - Shanduko yeGore Idzva 2006
Kutanga nguva nguva dzose mari mukati
Pfungwa yeMari muBhangi inogona kunge isina kuve iri rakakura dai mari yekutanga mairi ingadai isina kukwana kwazvo. Neraki, isu takave naEdge mune iyo chinzvimbo, uyo akanyatsogadzirirwa mamiriro akadaro. Iye mukana wekupedzisira akamirira nemoyo murefu mukana wake wekuuya, uye paakazosvika muChimurenga cheGore Idzva ra2006, akazorovera.
Mushure mekubudirira kudzivirira kwake kukwikwidza kweWWE mumutambo weKubvisa Chamber, John Cena aive akaneta chose uye ari panjodzi. Asi, hazvina kumisa Edge sezvo Vince McMahon akauya kumhete kuzomisa kupemberera kwaCena uye akazivisa kuti iyo Rated-R superstar inozopedzisira yaita mari mubhegi rake.
Mapfumo maviri gare gare, Edge aive akamira akareba pamusoro peCena yakatarisana neropa neake achangokunda mukombe weWWE. Mari iri mukati yakanyoreswa kuti ive yakakwana seanopokana nechitsitsinho akamirira shasha kuti ive padanho rake rekutambura kuti atore mukana wake uye ipe chirongwa chepamberi chemari-ins.
KUMASHURE MBERI 3. 4ZVINOTEVERA
wwe mitemo yakanyanyisa 2017 show yakazara
matauriro aungaita kana kusagadzikana pabonde kuri kwehukama
unonzwa kuda chii
ndinonzwa kutorerwa kurerutswa nemukomana wangu
murudo nemurume akatorwa
sei kusatiza kubva kumatambudziko ako
zvinhu zvakanaka kuisa mutsamba yerudo